नेपालमा भयावह बन्दै क्यान्सर, ७५ हजार नेपाली प्रभावित – Public Health Concern(PHC)
in जनस्वास्थ्य जानकारी, जनस्वास्थ्य बिशेष, जनस्वास्थ्य समाचार, राष्ट्रिय
नेपालमा हरेक वर्ष ३० देखि ३५ हजार क्यान्सरका नयाँ बिरामी थपिने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । क्यान्सर सुरुमा नै पत्ता लगाउन सकिए निको हुने भएकाले विशेष सर्तकता अपनाउन चिकित्सको सुझाव छ तर नेपालमा भने अधिकांश व्यक्ति क्यान्सरको अन्तिम चरणमा पुगेपछि मात्रै अस्पताल जाने गर्दा मृत्यु हुने क्रम बढेको छ । बिरामीले सुरुकै अवस्थामा सर्तकता अपनाउन नसक्नाले क्यान्सर रोगले भयावह रूप लिदै गएको चिकित्सकको भनाईछ।
महिलामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर, फोक्सोको क्यान्सर, आन्द्रा, पेटको क्यान्सर र पुरुषमा फोक्सो, घाँटी, आन्द्राको क्यान्सर हुने गर्छ । सुरुकै चरणमा क्यान्सर पत्ता लागेमा निको हुने र अन्तिम चरणमा क्यान्सर हो भनेर पहिचान भएमा प्रभावितलाई बचाउन मुस्किल हुने क्यान्सर रोग विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।
क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. आविश अधिकारीले क्यान्सर एक प्रकारको घाउ भएको भन्दै लामो समयसम्म घाउ देखिए तुरुन्त नजिकको अस्पतालमा गएर स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘क्यान्सरको उपचार हुन्छ तर प्रारम्भिक अवस्थामा अस्पताल पुग्नुपर्छ ।’ उनले चुरोट सेवन नगर्ने हो भने मात्रै क्यान्सर लाग्ने बिरामीको संख्या अत्यधिक घट्ने बताए ।
काउन्सिलका अनुसार क्यान्सर रोकथामका लागि जनचेतनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ ।
क्यान्सरबाट यसरी बच्न सकिन्छ
सर्तीजन्य पदार्थ सेवन नगर्ने
हरियो सागसब्जी खाने
रक्सी सेवन नगर्ने
शारीरिक व्यायाम गर्ने
पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध अविवाहित महिलाले ‘ह्युमन प्यापिलो’मा
भाइरसको भ्याक्सिन लगाउने
मासु कम खाने ।
काउन्सिलका अध्यक्ष रुद्रलाल कडरियाले क्यान्सरको अन्तिम स्टेजमा बिरामी अस्पताल पुग्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिरहेका छौं । सबैभन्दा मुख्य कुरा त जनचेतना फैल्याउनु नै हो ।’ नयाँ पुस्तालाई सुर्तीजन्य पदार्थबाट जोगाउनको लागि अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाबारे उचित ध्यान दिनुपर्ने कडरियाले बताए । तथ्यांकअनुसार नेपालमा झन्डै ५० जना क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर कार्यरत छन् ।
क्यान्सर रोग विशेषज्ञ प्राडा विष्णुदत्त पौडेलले सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न सके मात्रै क्यान्सर रोगीको संख्या घट्ने बताए । उनले भने, ‘क्यान्सर हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ । यसका लागि खानपान, जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । हरियो सागसब्जी खानुपर्छ ।’नेपाल क्यान्सर अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. विजेशराज घिमिरेका अनुसार शरीरको टाउकोदेखि खुट्टासम्म क्यान्सर हुन्छ । उनले भने, ‘४० वर्षमाथिका व्यक्तिलाई बढी मात्रामा क्यान्सर देखिने गर्छ । सहरीकरण, धुम्रपान, खानपानले क्यान्सर हुन सक्छ, जीवनशैलीलाई सरल बनाउनुपर्छ ।’
क्यान्सर के हो र कसरी लाग्छ ?
चिकित्सकका अनुसार क्यान्सर एउटा दीर्घ रोग हो । जुन शरीरको कुनै पनि अंगमा हुन सक्छ । यो एक प्रकारको घाउ हो जुन फैलिँदै जान्छ र अन्त्यमा बिरामीको मृत्युको कारण बन्छ । हाम्रो शरीर करोडांै सूक्ष्म कोषहरूले बनेको हुन्छ । ती कोषहरूले हाम्रो शरीर बनाउँछन् । जब तीमध्येका केही कोष बिग्रिन्छन्, तिनीहरूले आफ्नो काम गर्न छोड्छन् र अप्राकृतिक तरिकाले बढ्न थाल्छन् । त्यसरी बढ्दै गएपछि त्यो अंगमा घाउ बन्छ, जसको उपचार गरिएन भने त्यो अंगले राम्ररी काम गर्न सक्दैन र क्यान्सरको लक्षण देखिन थाल्छ ।
क्यान्सर डरलाग्दो रोग हो किनभने ती बिग्रेका कोषहरू अरू अंगमा सर्दै जान्छ र अरू अंगलाई पनि असर गर्दै जान्छ । यसलाई फैलिएको क्यान्सर भनिन्छ ।
क्यान्सर लाग्दा यस्ता लक्षण देखिन्छन्
दुब्लाउँदै जाने, घाउ लामो समयसम्म सन्चो नहुने, जन्डिस देखापर्ने, शरीरका अंगमा गाँठागुँठी देखिनेजस्ता लक्षण देखिने गर्छन् । यसैगरी, क्यान्सर लाग्दा मुखमा घाउ आउने र दिसामा रगत देखिनेजस्ता लक्षण देखिने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।सन्दर्भ सामग्री
Tags: Cancerhealth infohealth newsnasarne rogNCDs Nepal